NextMapping | Warqad cad
NextMapping™ Mustaqbalka Shaqada Cad
Marka xigta NextMapping waxaan sameyneynaa baaritaan joogto ah oo ku saabsan waxkasta mustaqbalka shaqada. Xaashiyahayaga Cad waxaa ka mid ah cilmi baarista AI, qalabaynta iyo robotics iyo sidoo kale caqabadaha goobta shaqada ee maanta wajahaya meheradaha.
CUSUB! Isbeddellada Shaqada Mustaqbalka Sare ee 20
Marka xigta NextMapping™ cilmi baaristeenu waxay ku saleysan tahay qaabkeena lahaanshaha, Habka PREDICT kaasoo lagu sharaxay iibiyaha ugu fiican, "NextMapping - Anticipate, Navigate and Abuur Mustaqbalka Shaqada."
Moodeelka PREDICT wuxuu ka kooban yahay heerarka 7 ee isbeddelka amaahda si loo bixiyo aragti istiraatiiji ah oo loogu talagalay hoggaamiyeyaasha, kooxaha iyo ganacsiyada. Qaabka PREDICT wuxuu bixiyaa qaab dhismeedka lagu caawinayo abuurista mustaqbalka cusub ee shaqada ee ku habboon istaraatiijiyadda iyo waxqabadka hadda jira.
Warbixintani waxay xoojinaysaa cilmi-baarista iyo sida loo caawiyo hoggaamiyeyaasha, kooxaha, ganacsatada iyo ganacsiyada si loo abuuro mustaqbalka!
Dib-u-fikirka Qorista & Haynta Mustaqbalka Shaqada
Mid ka mid ah diiradda ugu weyn ee ganacsiyada ku yaal 2019 iyo wixii dhaafsiisan 2020 waa helitaanka, shaqaalaynta iyo haynta dadka wanaagsan.
Hoggaamiyeyaasha waxaa caqabad ku ah helitaanka xirfad sare iyo diyaar u ah inay dadka shaqeeyaan. Hogaamiyaasha waxaa sidoo kale loolan kula jiraa sidii ay dadka kartida leh ugu sii jiri lahaayeen.
Xaqiiqdu waxay tahay in hoggaamiyeyaashu ay hadda la tartamayaan dhowr arrimood oo ku saabsan qorista - tartanku maahan shirkado kale oo keliya, ee waa shaqaalaha laftooda.
Xeeladaha shaqeynayay sanado ma shaqeyn doonaan hadda ama mustaqbalka. Aragtida ayaa is beddeleysa oo jiilkan shaqaaluhu uma badna 'shaqooyinka' ama 'shaqooyinka' maadaama ay raadinayaan mashruucyo macno leh, fursado waqti-dhiman, fursado shaqo oo la wadaago, shaqo fog iyo inbadan.
Qoraalkan cad ee bilaashka ah ee bilaashka ah, waxaan ku bixinaa xogta, cilmi baarista iyo qormooyinka ku saabsan sida loo noqdo geeska hore ee qoritaanka iyo joogtaynta kartida ugu sareysa.
Haddii Robotyadu yihiin mustaqbalka shaqada - Maxaa xigi doona aadanaha?
Dad badan oo mustaqbal leh waxay diirada saaraan aragtida dystopian-ka ee mustaqbalka halkaas oo aan ka shaqeyn doonno kuna noolaan doonno xaqiiqooyin robot oo la dumiyay.
Waxaa sidoo kale jira cilmi baaris xaqiijineysa in annaga oo ah bini'aadamka aan go'aan ka gaari karno SIDA aan u adeegsano robots, qalabaynta iyo AI annaga ayayna ku xiran tahay inaan u isticmaalno hal abuurnimo tikniyoolajiyadeed si aan u abuurno nolol wanaagsan oo aan uga shaqeyno xaqiiqda qof walba oo dunida jooga.
Xaashidan cad waxay ku siineysaa labada aragti ee aragtida waxayna kuu ogolaaneysaa inaad go'aansato mustaqbalka aad rabto inaad abuurto.